Dabaal degyo aan horey loo arag oo Muqdisho ka dhacay kadib guushii Xasan Sheekh - Caasimada Online
Home Warar Dabaal degyo aan horey loo arag oo Muqdisho ka dhacay kadib guushii...
Dabaal degyo aan horey loo arag oo Muqdisho ka dhacay kadib guushii Xasan Sheekh
Muqdisho (Caasimada Online) – Dabaal degyo waa weyn oo aan horey loo arkay ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo illaaa saaka sii socday kadib markii madaxweyne cusub uu yeeshay dalka.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha qaranka, isaga oo doorasho la isla gaaray saddex wareeg kaga adkaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Markii natiijada lagu dhowaaqay ayaa waxaa rasaas xooggan ay is-qabsatay gees ka gees magaalada, ayada oo shacabkuna ay isugu soo baxeen waddooyinka caasimadda, si ay u damaashaadaan una muujiyaan dareenkooda.
Dadka ayaa farxad iyo qosol ku dabaal degayey ayaga oo aad u qiireysan oo aan la celin karin, waxaana ka muuqatay farxad aan la qiyaasi karin heerkeeda.
Isu soo baxa shacabka ayaa ahaa mid aad ug weyn sidii la filayey, waxaana ay billowdeen xitaa inta aan natiijada lagu dhowaaqin, ayada oo ay muuqatay in lasii qiyaasayey guusha kadib markii la gaaray wareegga saddexaad.
“Xasan Sheekh guul guul,” ayey shacabka ku qeylinayeen ayaga oo qoob cayaar sameynaya, halka sidoo kale rasaas xooggan ayaa qeyb ka aheyd damaashaadka guusha taariikhiga ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee kursiga ka dega ee haddana dib loo doorto, wuxuu hoggaanka dalka kusoo laabtay shan sano kadib markii uu ka tegay, ayada oo xaaladdii uu dalka uga tegay aanay wax badan iska beddelin
Farxadda shacabka ka muuqata ayaad mararka qaar maleyneysaa inay aheyd sida dad sanado badan xabsi ku jiray oo dib u helay xoriyaddooda, iyo sida dad mugdi ku hoyday habeeno badan oo iftiinkii uu usoo bidhaamay.
Rajada shacabka ay ka qabaan madaxweynaha ayaa ah mid aad u sareysa, ayaga oo ku kalsoon inuu dib u qaban doono shaqadii wanaagsaneyn ee uu qabtay muddadii hore ee uu xilka hayey 2012 illaa 2017.
Sidoo kale, dabaal degyo kale ayaa ka dhacay inta badan magaalooyinka kale ee dalka, oo sidoo kale ay shacabka isugu soo baxeen.